GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language English Estonian Fijian Finnish French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabuverdianu Karen (S'gaw) Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Maya Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzeltal Ukrainian Urdu Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Zulu
1. Gịnị bụ Ụbọchị Ikpe?
Dị ka foto dị n’aka nri na peeji a na-egosi, ọtụtụ ndị chere na n’Ụbọchị Ikpe, ọtụtụ ijeri mkpụrụ obi ga-ezukọta n’ihu ocheeze Chineke, e kpee ha ikpe maka ihe ndị ha mere n’oge gara aga. Mgbe e kpechara ha ikpe, ụfọdụ n’ime ha ga-aga eluigwe, ebe ndị ọzọ ga-aga ọkụ mmụọ gaa tawa ahụhụ. Ma Baịbụl gosiri na ihe mere a ga-eji enwe Ụbọchị Ikpe bụ ka a napụta ndị mmadụ n’ahụhụ niile ha na-ata. (Abụ Ọma 96:13) Chineke ahọpụtala Jizọs ka ọ bụrụ Onyeikpe nke ga-eme ka ụmụ mmadụ kwụsị ịta ahụhụ.—Gụọ Aịzaya 11:1-5; Ọrụ 17:31.
2. Olee otú Ụbọchị Ikpe ga-esi eme ka ụmụ mmadụ kwụsị ịta ahụhụ?
Mgbe nwoke mbụ bụ́ Adam ma ụma nupụrụ Chineke isi, o mere ka ụmụ ya niile bụrụ ndị mmehie, ka ha na-ata ahụhụ ma na-anwụ anwụ. (Ndị Rom 5:12) Jizọs ga-eme ka nsogbu niile ahụ Adam kpataara ụmụ mmadụ kwụsị. Ọ ga-eme ka ọtụtụ ijeri mmadụ ndị nwụrụ anwụ si n’ọnwụ bilie. Akwụkwọ Mkpughe kwuru na Jizọs Kraịst ga-eme ihe a n’oge ọ ga-achị ụwa otu puku afọ.—Gụọ Mkpughe 20:4, 11, 12.
A ga-ekpe ndị ahụ a kpọlitere n’ọnwụ ikpe, ma ọ bụghị ihe ha mere tupu ha anwụọ ka a ga-eji ekpe ha ikpe, kama ọ bụ ihe ha mere n’oge a sagherela “akwụkwọ mpịakọta” ndị e kwuru okwu ha ná Mkpughe isi nke 20. (Ndị Rom 6:7) Pọl onyeozi kwuru na a ga-akpọlite “ma ndị ezi omume ma ndị ajọ omume.” A ga-akụzikwara ndị ahụ a kpọlitere n’ọnwụ banyere Chineke.—Gụọ Ọrụ Ndịozi 24:15.
3. Olee uru Ụbọchi Ikpe ahụ ga-abara ụmụ mmadụ?
Ndị ahụ a kpọlitere n’ọnwụ, bụ́ ndị na-amaghị banyere Jehova Chineke tupu ha anwụọ, ga-enwe ike ịmata Jehova, ma nwee ohere ịgbanwe àgwà ha ma mewe uche Ya. Ọ bụrụ na ha emewe uche Chineke, mbilite e bilitere ha n’ọnwụ ga-abụrụ ha “mbilite n’ọnwụ nke ndụ.” Ma ụfọdụ ndị a kpọlitere n’ọnwụ agaghị achọ ime uche Jehova. Mbilite e bilitere ha n’ọnwụ ga-abụrụ ha “mbilite n’ọnwụ nke ikpe.”—Gụọ Jọn 5:28, 29; Aịzaya 26:10; 65:20.
Mgbe Ụbọchị Ikpe ahụ, nke ga-adị otu puku afọ, na-agwụla, Jehova ga-eme ka ụmụ mmadụ ndị na-erubere ya isi zuo okè otú ahụ ọ chọrọ ya mgbe o kere mmadụ. (1 Ndị Kọrịnt 15:24-28) Nke ahụ bụ ihe ọma Chineke ga-emere ndị niile na-erubere ya isi! Chineke ga-esi n’abis kpọpụta Setan bụ́ Ekwensu, bụ́ onye a tụrụ mkpọrọ n’ebe ahụ kemgbe otu puku afọ, ka o lee ụmụ mmadụ ule ikpeazụ. N’oge ahụ, Setan ga-agbalị ka o mee ka ndị mmadụ nupụrụ Jehova isi. Ma ndị niile jụrụ ige Setan ntị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi n’ụwa.—Gụọ Aịzaya 25:8; Mkpughe 20:7-9.
4. Olee ụbọchị ikpe ọzọ a ga-enwe nke ga-abara ụmụ mmadụ uru?
Baịbụl kwukwara banyere “ụbọchị ikpe” ọzọ, bụ́ mgbe Chineke ga-ebibi ndị ajọ omume n’oge anyị a. Ụbọchị ikpe a ga-abịa na mberede dị ka Iju Mmiri nke oge Noa, bụ́ nke Chineke ji bibie ndị ajọ omume n’oge ahụ. Mbibi a Chineke ga-ebibi “ndị na-adịghị asọpụrụ” ya ga-eme ka ụwa a bụrụ ụwa ọhụrụ nke ‘ezi omume ga-ebi n’ime ya.’—Gụọ 2 Pita 3:6, 7, 13.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe ndị a kọrọ n’isiokwu a, gụọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? peeji nke 213 ruo nke 215 n’akwụkwọ a Ndịàmà Jehova bipụtara.
“Ikpe Ikpeazụ,” onye sere ya bụ Gustave Doré, 1832-1883
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ga-eme n’Ụbọchị Ikpe?